Hunguriga iyo qiyaano Dalaalnimo waa wax Soomaalidu eey aad ugu yaqyaqsato – MUDUGPOST
You are here: Home Hunguriga iyo qiyaano Dalaalnimo waa wax Soomaalidu eey aad ugu yaqyaqsato
Posted on July 8, 2017 by MUDUGPOST | 0 Comments
Hunguriga iyo qiyaano Dalaalnimo waa wax Soomaalidu eey aad ugu yaqyaqsato balse waqtigu waa isbedelay sidoo kale Dadkuna waa isbedelay. “Nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday”
Siyaasiintii hore ee Soomaalia waxa eey caan ku ahaayeen dad markasta ka xishooda Hunguriga iyo Dalaalnimada lagu iibiyo Dhulka iyo bada Soomali weeyn.
“Boqolsano oo Doowlad xumo ah, Hal habeen oo dowlad la’aan baa xun”. Xiliyadii 1960 -1990 dadka reer koonfureed waxaa soo maray siyaasiin iksugu jiray Raiisalwasaare, madaxweyne waxaan wada xasuusaanaa , Madaxweeyne Aadan Cade Aun, Cabdullahi Ciise Aun,Cumar Cabdirashiid Sharmaake Aun, iyo Maxamed Siyaad Bare Aun.
Ragaas waxaa lagu xasuustaa Wadaninimo, iyo iyagoo jecel dhulkooda kana xishooday hunguri iyo in eey iibshaan dhulkooda. Ogoow Qofku qalad waagalaa, xukuna wuu jelaan karaa” balse in aad noqoto qof iibiya dhulkiisa waa wax aanan dhaqan u laheeyn”
Madaxdaasi waxey ka heleen Soomalida Dhexededa Sharaf, iyo Qadarin wexeeyna noqdeen madaxdii ugu qiimaha iyo qaayaha badneeyd ee soo mara Soomaalida.
Waxaa hadaladoodii lagu xusuustaa
“intaan ku noolaan laheeyn Sharaf-dhac iyo Bah-dil, waxaa noo dhaama in aan ku noolaano Baahi” iyo “ Dalqal looma gurguurto”
Xiliyadii 1990-2016, waxaa na soo maray Siyasiin , eey ka midka ahaayeen Dr Cabdiqaasim Salaad Xasan , Dr cabdiqaasim waxaa lagu xasuustaa siduu ula hadlay kagana hor-yimid Doowladii Ethiopia markaasooy damacday in eey kala hadasho kana saxiixato Dhulka Soomali-Galbeed(Ogadeen).
Geed Geedkiisa ma dhalo: Cumar Cabdirashiid oo ah Wiil uu dhalay Madaxweeynihii hore ee Soomaalia Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa noqday nin dalaal ah una tafaxeeytay iibinta Dekedaha Soomaliya.
Cumar Cabdirashiid ma raacin taariikhdii aabihiis oo ahaa Madaxweeyne ku lahaa sharaf iyo Qadarin dadka Soomaliyeed
Waxaa hada soo baxay Siyaasiin u tafaxeeytay in eey iibsadaan dhulka iyo qeeyraadka Soomalia.
Cumar cabdirashiid ayaa wax ka saxiixay Bada Keenya eey ku heeysato Soomalia. Cumar Cabdirashiid ayaa ka ahaay Dalaal iibinta Dekeda Barbara iyo Boosaaso hada weli ka wada Koonfurta in uu hoos-geeyo dhamaan Dekedaha Somalia Wadanka U.A.E. Cumar cabdirashiid ayaa kireeystay siyaasiin badan si loo maja-xaabiyo doowlada hada ka Curaraty Wadanka Soomaliya. Waxaan wada ognahay mooshinkii dhicisoobay ee uu ka soo abaabulay Cumar cabdirashiid wadanka U.A.E.
Dadka Soomaliyeed waxaa ku waa jib ah in eey ka Codsadaan Maamulka Puntland in eey soo bandhigaan saxiixa Cumar cabdirashiid iyo wax yaabaha uu kula Heshiiyay doowlada U.A.E. “Arin aan sidii Futo Riyaad loo feeydid , ma fayoobaato”. Siyaasiinta Soomaliyeed waa in eey il-gaar ah ku hayaan Kooxdaan u tafa-xeeydatahay iibinta Dekedaha Soomaliya ee uu madaxa u ayhay Cumar cabdirashiid Sharmaake iyo kuwa la shaqeeya .
Bishii 02/20116,waxaa Wadanka Soomaliya ka dhalatay Doowlada Federaal ah taas eey u wada riyaaqeen Soomaliweeyn:
Waxaa nasiib ah in maanta eey hogaanka hayaan madax qiimo leh , jecelna Dhulkooda, Dadkooda, iyo Diintooda. Madaxdeeyne Farmaajo ayaa diiday in uu qaato lacag malaayiin ah si uu wadanka u hoos-geeyo Qabaailada ku dagaalamaya Bariga dhexe. Raiisalwasaare Kheeyre ayaa tegay Ethiopia kana codsaday in dadka soomaliyeed laga siidaayo xabsiyada ku yaala Wadanka Ethiapia. Madaxdaas ayaa ah maanta kuwa badbaadin kara Soomaliya kana hor-tegi kara Shirqoolada uu wado Mr Dalaal Cumar cabdirashiid.
“Waari meeysidi war hakaa haro”